China Concertina reza waya BTO-22 reza mesh 10m pane roll roll vagadziri uye vanotengesa | Xinpan
Sehunyanzvi concertina reza waya inogadzira, tinofara kukupa iwe concertina reza waya nemutengo wakaderera, kubhadhara kwakachengeteka, uye kuendesa panguva.
Sekureva kwechinhu ichi, kune inopisa yakapiswa kwakakurudzira reza waya, isina simbi reza waya, yakakwira zinc reza waya, pendi inosasa reza waya.
Zvinoenderana nenzira dzekugadzira reza waya, pane maviri coil reza waya, imwe chete coil reza waya, yakati sandara kuputira reza waya, yakatwasuka reza waya, yakasungwa reza waya mesh fenzi nezvimwe.
Zvinoenderana nebanga rezai waya, kune BTO-10, BTO-12, BTO-18, BTO-22, BTO-28, BTO-30, CBT-60, CBT-65 reza waya.
Yedu concertina reza waya inoshandiswa zvakanyanya musango dzesango, cheni dzekubatanidza fenzi uye dzakasungwa fenzi, uye inopa zvakajairika kuchengetedzeka. Semuenzaniso, waya pajira rinowanzoiswa pamusoro pefenzi yemombe kudzora mombe. Iyo concertina reza waya ine simba kwazvo uye inogona kutyisidzira kupindira nemaune. Naizvozvo, ndiyo sarudzo yakanakisa yemajeri, mabhesheni emauto nenzvimbo dzinoda danho repamusoro rekuchengetedza.
Mafomu: Kuchengetedza kwekuvaka, kusimudzira pamadziro, kuchengetedzwa kwemuganhu, kuchengetedzeka kwemauto.
Concertina Coil Tsanangudzo
Yakakurudzira Kutambanudza Kureba
Coil Dhayamita Kana Yakatambanudzwa
Kunonoka Kutendeuka paCoil
Sehunyanzvi concertina reza waya inogadzira, isu tinofara kuendesa Concertina Razor Wire. Uye kubhadhara kwakachengeteka uye nenguva yekuendesa nguva inokupa iwe.
Isu tinopa anotevera marudzi e concertina reza waya, senge
Zvinoenderana nechinhu ichi, ipa Hot dip kwakakurudzira simbi jira, Hot Dip kwakakurudzira simbi waya, Hot Dip kwakakurudzira simbi waya, Stainless simbi yairema, Stainless simbi waya. Dzese dzinogona kuramba ngura uye nekuchengetedza dzakapinza mashizha, ayo anotyisidzira chero munhu anoda kupaza.
Zvinoenderana nehupamhi hwetail, waya yekodhoni uye waya reza inopiwa. Muchokwadi, ese ari maviri ane akafanana chitarisiko uye mashandisiro. Nekudaro, concertina waya inowanzo kupihwa muchimiro checoil uye ine hombe dhayamita. Kusanganisira imwechete coil kana kaviri coil accordion tambo uye neakara accordion tambo.
Yedu concertina reza waya inogadzirwa neKuchenesa kwakakurudzira simbi, yakakwenenzverwa simbi, Stainless simbi, ine mutengo wakaderera uye hunovimbiswa mhando.
Sehunyanzvi concertina reza waya inogadzira, isu tinokwanisa kupa concertina reza waya maitiro ekugadzirisa masevhisi kuti uwane zvido zvako zvehukuru hwakasiyana uye zvigadzirwa.
Pashure: Nharembozha chengetedzo / matatu coil reza waya
Zvadaro: 2.5 mm main waya yakapetwa kaviri mitsara mina mapoinzi anopisa akanyika kwakakurudzira Barbed waya yefenzi